Indeksan'ny fironana momba ny dia: vinavinan'ny fivezivezena amin'ny asa an-trano
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Indeksan'ny fironana momba ny dia: vinavinan'ny fivezivezena amin'ny asa an-trano
Ny dia nankany Etazonia sy tany Etazonia dia nitombo 3.6 isan-jato isan-taona ny volana desambra, araka ny Index Travel Trends Index (TTI) farany nataon'ny Fikambanan'i Etazonia, izay manamarika ny faha-108 taonan'ilay indostrian'ny fanitarana.
Ny firoboroboan'ny firoboroboana dia voafehin'ny resaka famantarana eo amin'ny tsena fidirana iraisam-pirenena ahazoana tombony. Io fizarana io dia nitombo tamin'ny taha 2.8 isan-jato tamin'ny Desambra - tsara lavitra ny volana Novambra ny fitomboana 3.8 isan-jato isan-taona. Mbola ratsy kokoa noho izany aza, antenaina ny hitohizan'ny firoboroboan'ny fihenam-bidy, miaraka amin'ny tetikasa Leading Travel Index (LTI) izay miadana hatrany amin'ny 2.0 isan-jato hatramin'ny volana Jona 2019.
"Ny fihenan-karena ara-toekarena eran-tany sy ny fifanolanana maharitra dia hanohintohina ny fitomboan'ny dia an-tsokosoko", hoy ny filoha lefitra zokiolona amerikana momba ny fizahan-tany David Huether. "Ny fihenan'ny dolara antenaina sy ny fikatsoan'ny fifandonana eo amin'ny sehatry ny varotra amerikana-shina dia tokony ho tsara ho an'ny sehatra iraisam-pirenena, saingy ny tsena dia tsy afaka manararaotra feno ireo tombony ireo raha tsy misy fanampiana kely."
Huede dia nanondro ny fanavaozana maharitra ny USA USA ary ny fanatsarana sy fanitarana ny Visa Waiver Program (VWP) ho fandraisana andraikitra roa mpanao lalàna izay afaka manampy an'i Etazonia hamerina ny anjarany amin'ny tsena fitetezam-paritra maharitra manerantany manoloana ny fifaninanana mihombo. ho an'ny mpandeha iraisampirenena. Ny fanomezan-dàlana ara-potoana ny Brand USA avy amin'ny Kongresy dia manakiana mafy hanodinana ity fironana ity, toy ny fampidirana ireo firenena manana mari-pahaizana fanampiny ao amin'ny VWP.
Ny toerana mamirapiratra an'ny TTI dia ny tanjaky ny fitsangatsanganana an-trano: ny fitsangatsanganana an-trano an-trano dia nitombo 4.0 isan-jato tamin'ny volana desambra, raha nitombo 2.6 isan-jato kosa ny sehatry ny asa.
Ny fivezivezena an-trano amin'ny ankapobeny dia vinavinaina hitarina 2.6 isan-jato mandritra ny enim-bolana ho avy - manimba ny fitomboan'ny 3.4 isan-jato amin'ny fivezivezena amin'ny asa an-trano ary ny fitomboan'ny 2.2 isan-jato amin'ny fitsangatsanganana an-trano mandritra io fotoana io.
Ny TTI dia voaomana amin'ny US Travel ataon'ny orinasan'ny fikarohana Oxford Economics. Ny TTI dia mifototra amin'ny tahirin-kevitra momba ny loharanom-bolan'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina izay azo havaozina avy amin'ny maso ivoho. Ny TTI dia maka avy amin'ny: angon-drakitra fikarohana sy famandrihana mialoha avy amin'ny ADARA sy nSight; angona momba ny famandrihana sidina avy amin'ny Airlines Reporting Corporation (ARC); IATA, OAG ary tabulasi hafa momba ny dia an-tsokosoko iraisam-pirenena mankany Etazonia; sy angona fangatahana efitrano fandraisam-bahiny avy amin'ny STR.